Maqaal Dheer oo la magac Baxay Muqdisho waa magaalo madaxdeena |
Sidaa miraha Luulka Mawjadaha Badweyntaa ka muuqataa dhexdeeda Muqdisho, Muqdisho waa magaalo Madaxdeena,magacii dalkeena wanaajiya Muqdisho,Mudnaantii dadkeena Hagaajiso Muqdisho.
wixii ka danbeyay sanadkii 2009 magalada muqdisho waxaa ka muuqanayay isbadal dhinacyo badan oo ugu horeyso amniga,dhismaha iyo isdhexgalka bulshada ku dhaqan magalada Muqdisho iyo soomalida kale ee ka imaaneysa gobolada dalka iyo qaar kale oo ka imaanya wadamada dibada.
Dawladii KMG ahayd ee soomaliya ayaa waxaa ay qaaday talaaboyin waaweyn oo wax badan ka badalay sidii laga amaansanaa magalada xamar oo dad badan u arkaan haatan in ay tahay New Muqdisho ama Muqdishada Cusub.
Waxaa magalada ka socda Dhismayaal aan loo qaadan karin,kuwaasi oo qayb ahaan soo saaray bilicdii magalada oo soo jiidasho ku sameysay dad badan oo niyada ku hayay in ay mar un arkaan xamar oo dib u soo noqota kana soo laabta qab-qablaha iyo wax magaratada wadaniyada ka fogtahay.
Goobaha dalxiiska iyo Hotelada Caweyska ayaa waxaa ay noqdeen kuwa ugu mashquulka badan ee ummadda soomaaliyeed ku nuursato xili walba,waxaana magalada ka hanaqaaday Hotelo casri ah oo soo jiitay dad farabadan.
Dhawaan waxaan magalada Nairobi kula kulmay Mid ka mid ah maal-qabeenada soomaaliyeed oo ka soo noqday dalka Koonfur africa.Xaaji Maxamuud cabdi ayaa waxaa uu ahaa muddo dheer ganacsade soomaliyeed waxaana uu ka soo shaqeyay wadamo badan oo ganacsigiisa ka hana qaaday.
Xiliga aan la kulmaayay ayaa waxaa uu u diyaargaroobayay in uu baxo magalada Muqdisho oo sheegay in ay ugu danbeysay 2000 xiligasi oo amaanka magalada uu ahaa mid aad u liita,waxaana uu sheegay xiligani in ay soo jiidatay horumarka ay ku talaabsaneyso magalada Muqdisho.Mar aan wax ka weydiiyay in ay ka go’an tahay in uu xamar ganacsigiisa u soo raro ayuu ii sheegay “intii aan ka shaqeynayay wadamada Africa waxaan ku noolaa Dareen mana jirin in maskaxdeyda ay habeen ka baxday in hantida la iga dhaco oo cayr aan soo istaago”ayuu ku waramay Xaaji Maxamud.
Marka laga soo tago xaaji maxmuud waxaa jira dad kale oo xili horeba ka gaaraya in ay helaan Boosas banaan oo ay ka dhistaan goobo ganacsi ama deegaan kuwaasi oo keenay in kala iibsiga dhulka magalada Muqdisho uu noqdo midka ugu badan ee xiligan jira.
Safaradaha iyo Shirkadaha Beecmushtarka
Waxaa la xasuustaa dhawaan in wadamo badan ay safaarado ka furteen magalada Muqdisho kuwaasi oo u arkay in magalada tahay mid lagu noolaan karo,ka dib markii laga saaray xarkada Al-shabaab oo muddo gacanta ku hayay meelo kala duwan oo caasimada.
Safiirka Japan ee soomaaliya ayaa hadal qiimo leh u jeediyay wadamada Caalamka ee diidan imaanshaha xiligan ee soomaliya,waxaana uu ku amaanay dawlada Soomaaliya ay ka qaadatay sugidda amaanka caasimada soomaaliya ee muqdisho.
“wax badan kama duwan midan Caasimadii aan garaneynay Sanado hore,waxa kaliya oo dhiman waa in dalalka saxiib la ah soomaliya ay dib u qurxiyaan caasimada soomaliya,anagana Ka dawlad ahaan Diyaar baan u nahay”ayuu hadalkiisa ku sheegay Safiirka Japan ee soomaaliya oo ka hadlayay xaflad lagu furaayay qayb cusub oo lagu kordhiyay Garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Ergayga qaramada midobay ee soomaliya Augstina Mahiga ayaa waxaa uu New york ka sheegay bartamihii Sanadkii hore in Muqdisho soo noqotay waxaana uu wadamada caalamka ku booriyay in ay safaaradahooda soo raraan kana soo wareegaan Nairobi.
Shirkii Carabta iyo Turkiga ee ka dhacay Istanbuul ayaa waxaa ay walaalaha turkiga ku soo bandhigeen Qorshe lagu horumarinayo laguna dhisayo muqdisho,waxaana Rajab dayib uu ka dalbaday wadamada Khaliijka in ay sameeyaan hab lagu hagaajinayo caasimada Qaranka soomaliya ee Muqdisho.
Turkiga waxaa uu haatan wadaa Dhismayaal badan oo wadooyinka iyo Goobaha dawlada ah,maadama amaanka magalada soo noqday waxaana ay wacad ku mareen in daacadnimada dadka soomaliyeed iyagoo ka jawaabaya ay Mataaneen doonaan MUQDISHO IYO ISTANBUUL.
Dhismayaasha wasaaradaha dawlada ayaa ah kuwa ugu badan oo dawlada haatan ku mashquul-san tahay waxaana dawlada Soomaaliya ay sameeysay qorshayaal kala duwan oo bilicda goobaha muhiimka ah lagu soo celinaayo,waxaana dawlada ay kala kaashaneysaa wadamo saxiib la ah soomaaliya.
Dakkada caasimada ayaa waxaa ay noqtay mida ugu mashquulka badan goobaha dawlada ay maamusho,gaar ahaan meelaha dakhliga uu ka soo galo dawlada waxaana sidaa sheegay wasiirka Maaliyada oo hadlay dhawaan,waxaana dakkadda ku xiran maraakiib iyo doonyo waaweyn oo u muuqda malaha kuwii ugu badnaa ee dakada Caasimada yimaada sanadahan la xasuustaa.
Garoonka Aadan Cadde waxaa uu noqday midka ugu mashquulka badan,waxaana ka soo daga maalin walba cel celis 21 diyaaradood oo shaqooyin kala duwan oo maalinle ah ka wada caasimada dalka, waxaana ay taasi keentay in la kordhiyo isla markaasna la dayactiro qaybo badan oo garoonka diyaardaha ah,mar aan ka dagan Nafsad ahaanteydana 2012 waxaan niyada iska iri maba jiro Garoon diyaaradeed oo nala tartami kara,mahadaas Eebe ayaa leh ka dibna dawladeena iyo walalaha Turkiga.
Doorka Maamulka Banaadir
Gudoomiyaha G/banadir Maxmuud axmed nuur ayaa waxaa uu qaaday talaaboyin uu ku horumarinayo magalada isaga iyo kooxada la shaqeynaysa,waxaana cidamada nabad sugida oo la shaqeynaya ay ku guuleysteen in ay soo qabtaan kooxo badan oo amniga ka soo horjeeday.
Mudane Tarsan waxaa uu qabtay kulan balaaran oo ugu magac daray TIIRAANYO BIXIN oo la iskugu keenay dhamaan shacabka soomaaliyeed,waxaana uu ka bilaabay dadka dagan caasimada kuwaasi oo si laab furnaan ah isu saamaxay.
Gudoomiye Tarsan waxaa uu ka dhiidhiyay in Muqdisho sii ahaato sidii 22-sano ee la soo dhaafay waxaan uu amray dadka leh daaraha bur-bursan in ay dib u dhisaan ama dawlada hoose kala wareegi doonto,isla markaasina dayactiran doonto.Waxaa uu sidoo kale uu geeed dheer iyo mid gaaban u koray sidi magalada u heli lahayd qalabka lagama maarmaanka u ah dawladaha hoose,17-ka degmo ee caasimada ayaa waxaa uu u abuuray habab ay ku wadaagi karan qalab loogu talagalay furida wadooyinka,jarida dhirta ku baxday jidadkii Xamar oo ka dhigtay keyn lama dagaan ah.
Gudoomiye Tarsan ayaa waxaa qaylo dhaan gaadhsiiyay Jaaliyadaha soomalida ee London waxaana uu si gaar ah uu kala hadlay sida ay caasimada ku keeni karaan Qalabka dabka lagu damiyo oo aad caasimada ugu baahan tahay,Galinkii hore ee shalay waxaa tababar loo furay shaqaale dawlada Hoose leedahay oo loo tababarayo daminta dabka,waxaana magalada soo gaadhay gadiid aan cadadiisa haatan la cadeyn karin.
Ciidamda booliska soomaaliyeed ayaa waxaa ay caawinayaan Kuwa Ilaalada wadooyinka oo baaritaano Saacadle ah ka wada dhamaan wadooyinka magalada Muqdisho,waxaana taasi ay sababtay in la helo hab la isku haleyn karo oo dhinaca amaanka wadooyinka ah.
Dadka maraya wadooyinka Caasimada xiliyadii habeenkii ayaa soo dhaweyay sida ay ciidamda u digton yihiin iyo sida ay ugu heelan yihiin in ay sugaan amaanka dadka shacabka ah ee ku gooshaya wadoyinka.
“haa habeenkii si nabad ah ayaan ku marnaa wadooyinka,Ciidamda waan isbaranay waxay baarayaan gaariga,dabadeedna waxaa ay eegayaan qofka wata gaariga xaafada uu ku socdo iyo halka uu ka yimid,Aniga waxaan soo maray xalay 2:12AM,aad baana u Hambaliyeenaa”waxaa sidaa ii sheegatay Ubax Ciise oo Dalka Canada ka soo laabatay iyadoo ku sugan Muqdisho.
Dhinacyada xaafadaha Ciidamda Booliska iyo kuwa nabad-sugida ayaa habeen walba u diyaargarooba si ay u badalaan ciidamadii kale ee shaqeynayay maalintii,waxaana isbadalka uu dhacaa 5:00 galabnimo,sidaas darteed ma dhacaan waayadan falal amaanka xumeynaya marka laga reebo weeraro gaadmo ah.
Qurbajoogta soomaalida ee ka soo daga Xamar maalin walba iyagoo ku faraxsan sidii ay mar dalkooda ugu soo cagadhigteen iyagoo nabad ah,waxana ay maalin walba oo jimca ah u damaashaad tagaan xeebta dheer ee caaasimada gaar ahaan Dhinaca Liido.
Waxaa si caadi ah u socda ganacsiga suuqyada kala duwan ee dadka,iyadoo maalin walba Muqdisho xariga laga jaro Hotelo,warshado yaryar oo ku soo kordhay caasimada,waxaana dhawaan wasaarada Maaliyada in ganacstada bixiyaan khidmada canshuurta ah ee dawlada si amaanka loogu kaabo.Isdhexgalka dhalinyarada ayaa waxaa uu yahay mid ka wanaagsan sanadihii na gudbay,maxaa yelay waxaa loo abuuray shaqoyin,inkasta oo dawlada awoodo dheer aysan u lahayn in yay wada shaqo galiso dhamaan dhalinyarada caasimada ku nool.
Garoonka Koonis ayaa waxaa loo goglay Roog cagaaran,waxaana jira dhalinyaro badan oo galab walba isku balansada si ay kubada cagta ugu ciyaaraan,haweyn faraxsan iyo dad wajiyadooda wadaniyad ka muuqato ayaa waxaa ay daawadaan ciyaaraha dhalinta ee garoonka Kooynis.
Ugu danbeytiina Caasimada dalkeena waa lama huraan,waxaana shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan dhalinta soomaaliyeed ku dhiirigalinayaa jeceylka wadankooda iyo in mawaadin kasta oo soomaliyed xil iska saaro dalkiisa iyo dib u dhiskiisa.
MUQDISHO WAA MAGAALO-Madaxdeena, Magaceena dheereya Mudnaanta sharafteena Muujiya,Muruqeeniyo xoogeeniyo Maskaxdeena isku geeya, Magalaada Qurxiya, Sidiii Muraayad oo Kale Nadiifiya, Sidii Milicda oo Kale Muqdisho Maanta aduunka Uga Muuqataa Muqdisho,